मेरो कोरोना अनुभव र महशुस गरेको स्वास्थ्य प्रणालीMain Samachar
मेरो कोरोना अनुभव र महशुस गरेको स्वास्थ्य प्रणाली
२९ जेष्ठ २०७८, शनिबार १०:२६ प्रकाशित
रातिदेखि नै शरीरमा असहजता महशुस भएको थियो । बिहान नियमित जस्तै उठ्न पनि सकिनँ । विस्तारै खोकी लाग्न थाल्यो । नजिकै एकजना साथीको औषधि पसल थियो । सामान्य खोकीको औषधि लिएँ । एक दिन विचार गरें । तर खोकी बढ्दै गयो । अनि त मनमा चिसो पस्यो, कतै कोभिड त हैन । तर स्वाद थाहा नहुने, गन्ध थाहा नहुने जस्ता प्रारम्भिक लक्षण भने थिएन । दिउँसोदेखि खोकी बढ्दै गयो, लगातार जस्तो हुन लाग्यो र खानामा अरुची हुन थाल्यो ।
मलाई त्यसअघिदेखि नै पिनासको समस्या थियो । पोखरामा रहेर लामो समय नाक, कान घाटीको विशेषज्ञ सेवा दिँदै आउनु भएका अनुभवी डा. कुलदीप नारायण अग्रहरीसँग सल्लाह लिने गरेकी थिएँ । उहाँ असाध्यै सहयोगी भावनाको हुनुहुन्छ, फोनबाट होस् वा क्लिनिकमा होस् जहाँ भएपनि सुलभ तरिकाले उचित सल्लाह र सेवा दिने । आफूलाई देखिएका सबै लक्षण बताए । डा. अग्रहरीको सल्लाह मुताविक कोभिड टेष्ट गराउने निधो गरें । फेवा सिटी अस्पतालसँग सम्बन्धित मित्र दिनेश खड्कासँग पनि स्वास्थ्य उपचारको क्रममा सहयोग लिने गर्दथें ।
उहाँलाई सम्पर्क गरी तोकिएको समयमा अस्पताल पुगें । अस्पताल पुगेर स्वाब दिने तयारीका लागि लाग्ने समयसम्म प्रांड्गणमा उभिन पनि मलाई मुस्किल भइरहेको थियो । पिसिआरका लागि स्वाब दिएर फर्किएँ । बेलुका मेरो टेष्टमा कोरोना–१९ पोजेटिभ देखियो भन्ने खबर पाएँ ।
एकछिन त म असमञ्जस्यमा परें, अब के गर्ने, के नगर्ने । घरमा भाईको नाबालक छोरा साथमा छ । ममी हनुहुन्छ, उहाँ पनि सुगरको बिरामी, नियमित औषधि सेवन गर्नु हुन्छ । सबै कुरा विचार गरी बाबाले एकान्तबास बस्न माथिल्लो तलामा छुट्टै कोठा व्यवस्था गरी दिनु भयो ।
त्यसै अनुसार सचेततापूर्वक सामाजिक सुरक्षाका विधि प्रयोग गरें । सोहि रातिदेखि नै मलाई सास फेर्न गाह्रो हुन थाल्यो । ममीले भन्नुहुन्थ्यो, मलाई बाल्यावस्थामा नै निमोनिया पनि भएको थियो रे । त्यसले झन थप जटिलतातर्फ लान बल पुर्यायो होला । अब मैले तुरुन्त अस्पतालमा नै भर्ना भएर उपचार गर्नु पर्छ भन्ने कुराको निधो गरें । न्यून आर्थिक अवस्था भएको मेरो परिवार, बाबा आमाको आम्दानीको श्रोत पनि दरिलो छैन। ती सबै व्यवहारिक अवस्था विचार गरी पोखराको सरकारी सुविधा उपलब्ध गराउने भनी कोभिडको उपचार सेवा शुरु गरेको क्षेत्रीय अस्पतालमा सम्पर्क गरें । बेड खाली छैन भन्ने जानकारी भयो । आफूलाई भने कति छिटो अस्पताल पुगौं भने जस्तो भएको छ । पछि निजी अस्पताल गण्डकी मेडिकल कलेजमा एउटा मात्र बेड बाँकी रहेको भन्ने जानकारी पाएँ र तुरुन्त अस्पताल पुगें । बिरामीको उपचारको शुरु गर्नु त कता हो कता ? अग्रीम धरौटी रकम जम्मा गर्नु पर्ने भयो ।
आफन्तको सहयोगमा बल्लतल्त रकम जुटाएँ । उपचार शुरु भयो । अस्पतालको व्यवस्था, तत्कालका लागि बिरामीलाई चिकित्सकले गर्ने व्यवहार जस्ता कुराको कठिनाई हेर्ने हो भने कहाली लाग्दो छ । कसरी सामान्य मानिसले उपचार गर्ने होला ? खर्चको बढ्दो व्ययभारले आत्तिएर केही किफायत हुने कुरा विचार गरेर ममीले सरकारी अस्पतालमा सर्नको लागि सम्पर्क गरी रहनु भएको थियो । बल्ल तल्ल चाँजो मिलाउनु भएछ । केही दिनपछि क्षेत्रीय अस्पतालमा भर्ना भएँ । आर्थिक रुपमा केही राहत भयो । दैनिक बेड चार्ज बापत लाग्ने हजार रुपैयाँबाट मुक्ति मिल्यो । अब औषधि मात्र किनेर हुने भयो । दैनिक करिव ५/७ हजारको औषिध लाग्थ्यो ।
उपचारपछि केही निको महशुस घरमा नै एकान्तबास बस्न सकिने भन्ने डाक्टरको सल्लाह अनुसार घर आएँ । बाह्र दिनपछि दोश्रो पिसिआरका स्वाब दिएँ । रिपोर्ट नेगेटिभ आयो । बल्ल कोरोनालाई जितेको महशुस भयो ।
आफू बिरामी भएर अस्पतालको बेडमा पल्टिरहँदा पनि मैले अनलाइन पत्रिका पढ्ने गरे । खबरमा उहीँ दिनानुदिन संक्रमितको संख्या बढेको बढ्यै छ । कैयौं मानिस बिरामी भएर बल्लतल्त अस्पतालको ढोकमा पुग्छन्, शैया छैन, बेथा बढ्यो अक्सिजन छैन, भेन्टिलेटर र आईसियु सेवा पाउन महामुस्किल हुन्छ । उपचारको अभावमा ज्यानै गुमाउनु परेको छ । दैनिक मृत्यु हुनेको संख्या वृद्धि भएको छ, घट्दैन । जेष्ठको अन्तिम साता टेक्दै गर्दा पनि दैनिक साठी सत्तरीको हाराहारीमा कोराना संक्रमणका कारण नेपालीको मृत्यु भएको छ । सामान्य नागरिकलाई जनस्वास्थ्यका आवश्यकता पूरा गरेर उपचार उपलब्ध गराउन सरकारको तर्फबाट गरिएका कार्यहरु यथार्थमा प्रभावकारी र सुलभ छैनन् । संक्रमणको उपचारका लागि सरकारी संरचनाले थेग्न नसकी रहेको अवस्थाले मन खिन्न हुन्छ । उता राज्यले भने न्युनतम स्वास्थ्य उपचारको हकलाई मुल कानून भनिने संविधानको मौलिक हकमा नै ग्यारेण्टी गरेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यले हरेक वर्ष अर्बौं बजेट लगानी गर्छ ।
नागरिकले आधारभूत स्वास्थ्य उपचार प्राप्त गर्न सधैं कठिनाइ ब्यहोर्नु पर्ने कुरामा कुनै परिवर्तन आएको महशुस हुँदैन । विगत वर्षहरुमा सरकारले प्रत्येक परिवारलाई स्वास्थ्य बिमालाई अनिवार्य गराई प्रभावकारी ढंगवाट लागू गर्ने नीति लियो । सामान्य नागरिकलाई आज पनि स्वास्थ्य बिमा ‘कुन चराको नाम हो’ जस्तो छ । बिमा गराएकाले सुविधा लिँदा झेल्नु परेका कठिनाईले थप नागरीकलाई सरकारी बिमाप्रति उत्साही बनाउन सकेन । यसबाट राज्य व्यवस्था सधैं ‘उस्तै उस्तै हो नानु’ भने जस्तो अवस्थामा छ । जनचाहना अनुसार परिवर्तनको आभास दिन किन नसकेको होला ? भन्ने प्रश्नको सटिक जवाफ के जनप्रतिनिधि, के प्रशासक कसै सँग छैन । यसबाट हामी कति जनमूखी कार्यमा समर्पित छौ भन्ने कुरालाई देखाउँछ । बिरामीले पाउनु पर्ने औषधि, अक्सिजन, आईसियु, भेन्टिलेटर जस्ता आधारभूत चिजवस्तुको सुविधा सुलभ छैन । नागरिकको जीवन रक्षाका अपरिहार्य चिजवस्तुको अभाव छ । राजनैतिक दलहरु राष्ट्रिय मुद्दामासम्म पनि एक हुन नसकी सत्ता र स्वार्थमा नै केन्द्रित हुन्छन् र कहिले सडक, कहिले अदालत पुग्छन् । प्रशासनको तर्फबाट एकपछि अर्को निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरिएको छ । उपचारको स्थायी विधि खोप सबैले पाउन सक्ने ठोस आधार अझै बनेको छैन । विकसित भनिएका खोम उत्पादक राष्ट्र पनि तछाडमछाडको अवस्थामा छन् । भारतको सिरम इन्टिच्युटबाट नेपालले खरिद गर्ने भनेको ५० लाख डोज खोप कमिसनको चक्करले रोकिएको भन्ने दुखः पूर्ण समाचार आउँछ । राज्य प्रमुख र सरकार प्रमुख खोप कसले देला भनी उत्पादक राष्ट्रसँग अनुनय विनय गरी रहेका छन् । साधिकार निकाय अझै किटानी खबर दिन सक्दैन । यस्तो विषम अवस्थामा आम नागरिक कोठा भित्र बन्द रहनु परेको छ ।
कोरोना आफूलाई नलाग्दा सम्म केही होइन भन्ने लाग्न सक्छ । तर तत्कालिन लक्षण जे जस्तो भए पनि यसले दीर्घकालसम्म पार्ने प्रभाव भने जटिल खालको हुँदो रहेछ । यसमो प्रत्येकले बेलैमा सचेत हुन र जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गर्ने कुरामा कसैले हेलचक्र्याइँ गर्न हुँदैन । अझै गाउँबस्तीसम्म पुग्ने गरी स्वास्थ्य मापदण्डका कुरालाई प्रचारप्रसार गर्नु पर्ने खाँचो छ । हाम्रा गाउँघरसम्म नै पुगि सकेको यस महामारीलाई नियन्त्रण गर्ने प्रभावकारी उपाय भनेको स्वास्थ्य निर्देशन र मापदण्ड पालना गर्ने बारेको जनचेतना नै हो । अब कोरोना मानव सभ्यता छँदासम्म पृथ्वीमा आयो, आयो । सचेतता, सहयोग र सहकार्य नै यसको निदानको अचुक औषधि हो भन्ने कुरा सर्वत्र बोध गराउनु जरुरी छ ।
लेखकः कानूनको विद्यार्थी हुन् ।